Warbixin Ku saabsan doorashada Kenya
Home Somali News East Africa Warbixin Ku saabsan doorashada Kenya
Cod bixiyaasha ayaa si dulqaad kujiro u taagnaa safaf dhaadheer si ay codadkooda uga dhiibtaan Xaafada isku raranta ah ee Kibera, ee magaalada Nairobi ku taala, dadkan ayaa kamid ah 14-ka Malyan qof, ee u diiwaangashan doorashada guud ee dalka Kenya.
Meelaha ugu horeeyay ee laga codeeyay waxaa kamid ah magaalada Garissa ee Caasimada gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya.
“Alxamdulilaahi rabil Caalamiin, saakay waxaan kalahay goor hore, waxaana ka codeeyay bartamaha magaalada Garissa, waxaana usoo codeeyay si nabad ah, anigoo waliba codkeyga ugu soo shubay dadkii aan taageerada u ahaa” sidaa waxa yiri mid kamid ah Soomaalida ku nool magaalada Garissa.
Xilibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane laga soo doorto deegaanka “Kaama-kuuji” haatana tartanka kujira ayaa markii uu soo codeeyay, kadib isagoo dareenkiisa ka waramaya waxa uu yiri: “aragtideeyda aad beey u fiicantahay 100% dadka Soomaaliyeed wey I taageersanyihiin, guul ayaan ilaaheey ka rajeeynayaa..”.
Waxaa jira murashixiin kale, oo Xilibaan Yuusuf Xasan kula tartamaya jagadaas, waxaana kamid ah Cumar yuusuf Maxamed, kana tirsan xisbiga ODM, waxaana uu dhankiisa ka hadlay dareenkiisa iyo rajada uu qabo, waxaana uu yiri:
“…Waxaan ka rajeeyneynaa wax fiican, waana guuleysanayaa insha alaah…” ayuu yiri Cumar Yuusuf, oo kamid ah dadka tartanka adag kula jira Xilibaan Yuusuf Xasan.
Cod bixiyaasha ayaa go’aamin doona doorashada xilka madaxweyne oo ah mid aad loogu tartamayo.
Saadaasha dadka laga sii qaaday ayaa muujineysa in R/wasaare Raila Odinga, iyo Uhuru Kenyata oo ah R/wasaare ku xigeenka dalka ay aad isugu dhowyihiin, aadna ay uga horeeyaan lixda musharax kale ee tartanka kula jira.
Intii doorashada laysku diyaarinayay ayaa murashixiinta iyo xubnaha dalka magaca ku leh, ay dadka reer Kenya ugu yeerayen ineey nabadda ilaaliyaan, si kasto oo ay natiijada u dhacdo, hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in falal gacan kahadal ah oo teel teel ah ay meelaha qaar ka dhaceen.
Dhowr iyo toban qof, oo 7 kamid ah ay Booliska yihiin ayaa saakay lagu dilay, weerar kadhacay magaalo xeebeedka Mombasa.
Tiro kabadan 1,000 qof ayaa dhimatay qalalaase ka dhashay doorashooyin kadhacay dalka Kenya 2007-dii.
Mr Raila Odinga, ayaa saakay ka codeeyay dugsiga Hoose Iyo Dhexe ee Kipera, jawigana waxa uu ahaa mid aad udagan, mr Odinga ayaa markii uu codeeyay kadib sheegay inuu isagu guuleeysanayo.
“Weli dadka reer Kenya tiro sidaan ubadan oo kale iskuma soo bixin, si ay u muujiyaan xuquuqdooda dimoqraadiyadda, isbadal ayay u codeeynayaan dorashadan socota…” ayuu yiri Raila Odinga.
Mr Odinga, ayaa dadkii saakay isku soo baxay usheegay in hadii laga guuleeysto uu natiijada ogolaan doono.
Dhinaciisa markii uu codkiisa dhiibtay Uhuru Kenyata, uu taageerayaashiisa u sheegay in wararka sheegaya in gacan kahadlka dhacay, ama mashiinada qaar ee xumaaday meelaha qaar aysan isaga niyad jabin doonin.
“…Rajo ayaan qabnaa, aad ayaan rajo uqabnaa, waxaan ka warsugnaaba waa guul aan gaarno, hadii ilaaheey idmo…” ayuu yiri Uhuru Kenyata.
Uhuru, waxa uu sheegay in Kenya ay jiri doonto doorashada kadib, ayna tahay in dhamaan dadka reer Kenya ay fahmaan in midnimada iyo qaranka ay tahay tan ugu muhiimsan.